Fantaro i Jerome Herrera, hampiatrano ny kaonty Twitter @AsiaLangsOnline ny 10-16 Desambra 2019 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Desambra 2019 5:16 GMT
Sary nomen'i Jerome Herrera.
Isa-kerinandro dia hamaly fanontaniana maromaro momba azy ny mpampiantrano tsirairay ary hanome fomba fijery fohy momba ny fiteniny. Miaraka amin'i Jerome Herrera (@jeromecherrera) ny fanontaniana sy valiny etoana izay manolotra ny zavatra horesahiny mandritra ny herinandro amin'ny maha-mpampiantrano azy.
Nanomboka liana tamin'ny tenindrazako aho rehefa nampianatena espaniola ary nahatsikaritra fitovitoviana maromaro teo amin'ny fiteny roa. Nitondra ahy hahatsikaritra zavatra maro izany, dia feno zava-mahatalanjona arakaraka ny ianarako ny fahasamihafan'ny fiteny, fotoana ary ny olona nandranitra ny fiteny Chabacano de Zamboanga maoderina.
Ankilan'ny fiteny Chabacano sy ny ara-bola manokana, mpanandratra ny teny ihany koa aho amin'ny fanomezan-dra isa-potoana raikitra. Tamin'ny aogositra 2018, nandray ny loka Blood Galloner avy amin'ny Vokovoko Mena aho.
Be tokoa ny fahalianana antserasera amin'ilay fiteny entin'ny hanina eo amin'ireo Filipino ampielezana. Andavanandro koa indray isika mahita ny fijotson'ny mpiteny Chabacano noho ny fironana kokoa any amin'ny fiteny hafa toy ny anglisy sy ny Filipino (fiteny tagalog natao ho tenim-pirenena ao Filipina)
Tiako ny hiresaka momba ny:
Fomba samihafa (indrindra eo amin'ireo tanora mpiteny Chabacano) azo atao na antserasera na andavanandro hameloma-maso ny fiteny Chabacano.
Fitovitoviana eo amin'ny Chabacano sy ny Espaniola
Fiandohan'ny voambolana Chabacano sasantsasany.
Izay ataon'ny governemanta ao an-toerana (fiadidiana) mba hameloma-maso ny fiteny Chabacano
Mbola ilaina ve ny fiteny Chabacano amin'izao fotoana?
Tiako ny tanora ho afa-mirehareha amin'ny fiteny Chabacano satria misy fahatsapana eo amin-dry zareo fa toy ny miteny ratsy na tsy mahafinaritra ny miteny Chabacano.
Fanantenako indray andro any ny Zamboangueños hahatakatra sy hahay hitia ny mahazavadehibe ny fiteny Chabacano sy ny toerana manandanja ananany eo amin'ny sehatra manerana izao tontolo izao sy ny tantarany tsy manampaharoa sy marevaka.